Naya Drishti | दाङमा गाउँपालिका अध्यक्षले शनिबार सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको फोटो खिच्दा लफडा - Naya Drishti दाङमा गाउँपालिका अध्यक्षले शनिबार सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको फोटो खिच्दा लफडा - Naya Drishti
मंसिर २२, तुल्सिपुर । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्षले शनिबार गाउँपालिकाको गाडी लिएर पिकनिक खान गएको फोटो तथा भिडियो खिच्ने क्रममा लफडा भएको छ ।
शनिबार, दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाका कर्मचारीले पिक्निकको आयोजना गरेको थिए ।
गाउँपालिकाका वडा नं. ३ भ्यूडहरमा आयोजना गरिएको पिक्निकमा गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीलार्ई पनि निम्ता गरिएको थियो ।
त्यो निम्ता स्वीकार्दै गाउँपालिकाकै गाडी लिएर अध्यक्ष पिक्निक स्थलमा पुगेका थिए ।
त्यो थाहा पाएपछि शान्तिनगरका केही युवा र केही यूट्युबरलाई लिएर पिक्निक स्थलमा भएका गतिबिधि र अध्यक्ष सवार गाडीको फोटो खिचिरहेको बेला मुटभेट भएको थियो ।
त्यो मुटभेटलाई लिएर गाउँपालिका अध्यक्ष डाँगी विरुद्ध त्यहाँका युवा कर्णदीप देवकोटाले प्रहरी कार्यालय चिराघाटमा उजुरी दिएका छन् ।
गाउँपालिकाको सरकारी गाडी शनिबार पनि दुरुपयोग गरेको र त्यसको भिडियो खिच्ने क्रममा आफुलाई हातपात गर्नुकासाथै गालीगलौज गरेको भन्दै उजुुरी दिएको स्रोतले बताएको छ ।
यस विषयमा पीडक भनिएका गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगी र पीडित भनिएका कर्णदीप देवकोटासंग फोन सम्पर्क हुन सकेन् । पिक्निकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । शनिबारको आयोजना पारि कर्मचारीहरुले पिक्निक आयोजना गरेका थिए ।
दाङमा आफ्नै साथीहरूले हानेको गोली लागेर घाईते भएका पौडेलको मृत्यु
मंसिर २१, तुल्सिपुर । पाँचवटा गोलीका छर्रा लागेर गम्भीर घाइते भएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ फुलवारी निवासी खुसलराम पौडेलको मृत्यु भएको छ ।
भारतको लखनउमा उपचारको क्रममा शनिबार उनको मृत्यु भएको स्थानीय दिपशिखा घर्तीले जानकारी दिईन् । नखनउमा उपचार सम्भव नभएपछि घर ल्याउने क्रममा शनिबार मध्यान्ह १२ बजे रुपैडिहामा मृत्यु भएको हो । पौडेलको शनिबार साँझ नै दाह संस्कार गरिएको थियो ।
पौडेललाई मंसिर १० गते राति सिकार खेल्न अमिलियाको चाउखोला बनमा गएको बेला उनीसंगै गएका साथीहरुले प्रहार गरेको गोली लोगर गम्भीर घाईते भएको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रहरीले घटनास्थल नजिकैबाट एकथान बन्दुक समेत बरामद गरेको थियो । मंसिर १० गते बुधबार राति साढे ९ बजेतिर उक्त घटना भएको थियो । पौडेलको ढाडको पछाडी तीन ठाउँमा र तिघ्रामा दुई वटा गोलीको छर्रा लागेका थिए ।